Zviratidzo zveA7 Zvaunosasa Vitamini - TELES RELAY
HOME » MY HEALTH Zviratidzo zve7 Zvinoti Unoshaya Vitamini
7 zviratidzo zvinoratidza kuti hauna mavitamini
Nguva dzekuchinja kwemwaka, kushandiswa kwebasa, kudya kwakakomba kana maitiro ehutano hwehutano: zvinhu izvi nezvimwe zvakawanda zvinochinja kugadzika kwezvibereko mumuviri. Kukundikana kufunga nezvehuwandu hwavo mukudya kunogona kukonzera kushaya simba kwevhithamini, izvo zvinogona kutungamirira kune zvirwere zvakasiyana-siyana.
Zviratidzo zvekushaiwa - chii chatingadya kukunda kusava nemavitamini
1. Bvudzi uye misumari misoro. Biotin (vitamin B7) kusimba ndeimwe yezvinokonzera zviratidzo izvi. Kana zvipikiri zvako zvinoputika nyore uye vhudzi rako rakaparadzana, unofanira kudya michina yekurai, cauliflower, sipinashi, broccoli, zviyo uye bhanana. Kubata bvudzi uye misumari zvinogona kuva chiratidzo chekushaya ropa, saka iva nechokwadi chekuona chiremba wako usati watora mavitamini.
2. Miromo yakasungwa nemaronda pamakona. Muviri wako unokuudza kuti iwe uri pfupi Fer uye vitamini B, inogona kuwanika mumuchero, miriwo inotapira, nutswe uye mbeu dzose.
3. Meso matsvuku uye mutsvuku machena mukati meziso. Zvokudya zveVitamin A-richibatsira kubvisa chiitiko ichi chisina kunaka chinogona kukura kuva xerophthalmia uye chinotungamirira kuhupofu hwakakwana kana zvimwe zvakakomba nemigumisiro. Nenzira yakanaka, iwe uchawana zvaunoda mumishonga yemichero, pamwe chete nemuchero, muchi nemaruva emaruva.
4. Kusanzwisiswa kusina kutsanangurwa. Vitamini A inokurudzira collagen maitiro uye inosimbisa midzi yeropa. Kuonekwa kwehematomas paganda kunoratidza kuti unofanira kudya zvimwe broccoli, strawberries, mangos uye oranges. Kuvhiringidza pamuviri kunogonawo kuitika nekuda kwekushaya kwevitamini K.
5. Goosebumps pamakumbo nemashure emaoko, inozivikanwawo se actinic keratosis, inowanikwa kana iwe usingadyi zinc yakakwana uye vitamini A. Izvi zvinowanika mumakumbo, hummus, dzungu, sweet potato uye melon.
6. Bumpy misumari. Kushayikwa kweguruva juice kunokonzera kuti simba risina simba rokudzivirira mavhithamini. Saka wedha digestive enzyme (chikafu chinodyisa) kune zvokudya zvako.
7. Mitsipa isingagadziriswi kana Willis-Ekbom's disease. Kana iwe uchinzwa kudiwa sachinja-chinja kuti ufambe makumbo ako pavanenge vakasununguka, unogonawo kunge une matambudziko ekurara. Magnesium ichakubatsira kutsungirira dambudziko iri.
8. Kusagadzikana kusachengetedzwa. Kuti uzvisimbise, shandisa vitamini C muchidya chako.
Mushure mekuona imwe kana zvimwe zviratidzo zvekushaiwa kwevhitamini, usakurumidza kutenga zvigadzirwa zvemugodhi uye vitamini complexes paresmiti; izvi hazvibatsiri pasina kudya kwakakwana. Iwe hauzokwanisi kudya mavitamini ose zvisati zvaitika; Vanoda hutano hwakanaka kuti hupinde muropa.
Usati wazadza kicheni chako nekamuri capsules omega-3, zvinyorwa zvegungwa zvegungwa uye zviratidzo zvekudzivirira muviri, bvunza chiremba wako kuti aone mavitamini kana zvidimbu zvakashata zvaunoshaya kuti uone kuti yakakwana sei. Ramba uine utano.
Ichi chinyorwa ndechekuziva nezvechinangwa chete. Usazviita iwe pachako kuongororwa kana kuzvirapa, uye chero upi zvawo unobvunzurudza unyanzvi hwehutano hwakabvumirwa usati watanga ruzivo rwakataurwa munyaya yacho. Bhuku reDare reBhuku haritsigiri chero zviitiko uye hazviiti mutoro wekukuvadza kungazoguma nekushandiswa kwemashoko anowanikwa munyaya yacho.
Hypertension: 5 zvokudya zvinodzivirira kuti zvibatanidze mune zvekudya zvako nekukurumidza!
Makumbo ako akawirwa here? Heano chikafu chinogadziriswa kuti chibatsire kubvisa "mitsipa yakakura"!